Ezigbo ulo Nyocha maka nlekota oru omume
Maka ndị nkụzi Nchịkọta klas
Ihe Ntughari Ntughari Home Maka Nkwado Agbanwe Omume
Dị ka ndị nkụzi pụrụ iche, anyị na-ewekarị iwe megide ndị nne na nna n'ebughị ụzọ nye ha ụzọ dị mma iji kwadoo ihe na-eme na klas anyị. Ee, mgbe ụfọdụ nne na nna bụ nsogbu ahụ. Achọpụtara m na ọ bụrụ na ị nye ndị nne na nna ụzọ dị mma ị ga-esi na-akwado omume ị chọrọ, ọ bụghị nanị na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma n'ụlọ akwụkwọ, ị na-enyekwa ndị nne na nna ụdị nke ịkwado àgwà ọma n'ụlọ.
Ihe ederede nke ụlọ bụ ụdị onye nkụzi nke ndị nkụzi na onye na-amụrụ ihe na-etolite, karịsịa ụmụ akwụkwọ toro eto. Onye nkuzi na-eme ya kwa ụbọchị, a na-ezigara ya kwa ụbọchị, ma ọ bụ na njedebe nke izu. A na-ezigakwa kwa izu kwa ụbọchị kwa ụbọchị, karịsịa ma ụmụaka. Ihe ịga nke ọma nke usoro ihe omume ụlọ bụ ma eziokwu bụ na ndị nne na nna maara ihe omume ndị a tụrụ anya ya na ọrụ nwa ha. Ọ na-eme ka ụmụ akwụkwọ nwee ike ịza ajụjụ nye nne na nna ha, karịsịa ma ọ bụrụ na nne na nna (dịka ha kwesịrị) bụ ndị na-akwụghachi ụgwọ omume dị mma ma na-agbapụta nsogbu maka omume na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ nke a na-anakwere.
Ihe ederede ebe obibi bụ akụkụ dị ike nke nkwekọrịta omume, dị ka ọ na-enye ndị nne na nna nzaghachi kwa ụbọchị, nakwa na ịkwado nkwado ma ọ bụ nsonaazụ ga-eme ka àgwà ahụ dị mma ma kpochapụ ihe na-adịghị mma.
Ịmepụta Ụlọ Ntuba
Kpebie ụdị ọkwa ga-arụ ọrụ: kwa ụbọchị, ma ọ bụ kwa izu? Dị ka akụkụ nke Atụmatụ Mmelite Omume, ị nwere ike ịchọrọ ederede kwa ụbọchị. Mgbe nzube gị bụ imechi tupu ịchọọ BIP zuru ezu, ị nwere ike ime nke ọma na ederede ụlọ kwa izu.
Debe nzukọ na nne na nna nke nwa akwụkwọ a. Ọ bụrụ na nke a bụ akụkụ nke BIP, ị nwere ike ichere maka nzukọ ìgwè ndị IEP, ma ọ bụ na ị nwere ike izute ndị nne na nna n'ihu oge iji kọwaa nkọwa. Nzukọ gị kwesịrị ịgụnye: Gịnị ka ndị nne na nna na-ebute? Hà dị njikere ịkwado omume ọma ma mepụta ihe ga-esi na-akpa àgwà ọjọọ?
Na ndị nne na nna, bịa na omume ndị a ga-etinye na ederede ụlọ. Nwee klas abụọ (ịnọdụ ọdụ, aka na ụkwụ na onwe gị) na agụmakwụkwọ (imecha ọrụ, wdg) àgwà. E kwesịghị inwe àgwà kariri àgwà 5 maka ụmụ akwụkwọ elementrị, ma ọ bụ ọmụmụ 7 maka ụmụ akwụkwọ sekọndrị.
Na ogbako, kpebie otu a ga-esi na-akpa àgwà: maka ụmụ akwụkwọ kọleji otu usoro nhazi site na 1 ruo 5, ma ọ bụ ekwenyeghị, nke a nabatara, pụtara ìhè kwesịrị iji. Maka ụmụ akwụkwọ elementrị otu usoro dịka nke m kere n'ime akwụkwọ a na-ebipụtaghị n'efu na ihu igwe ma ọ bụ na-amụmụ ọnụ ọchị na-arụ ọrụ nke ọma Mara na gị na ndị mụrụ gị kwenyere na ihe ọkwa ọ bụla na-anọchi anya ya.
Kpebie, na ogbako ihe ga - esi na "mwepụ" na nkwado dị mma.
Nweta ihe ga-esi na ya pụta maka ịhapụ ederede ederede na ndị nne na nna, ma ọ bụ ịlaghachite ya> bịanye aka na ụlọ akwụkwọ. N'ụlọ, ọ nwere ike ịnwe ihe telivishọn ma ọ bụ ihe ùgwù kọmputa. Maka ụlọ akwụkwọ, ọ nwere ike ịnwụ oge maọbụ oku na-aga n'ụlọ.
Bido Ụlọ Edere na Monday. Gbalịa ịza ajụjụ ndị dị mma ụbọchị ole na ole mbụ, iji wuo ntọala dị mma.
01 nke 02
Ezigbo Nkọwa Home
Ihe ndekọ ụlọ mbụ. Websterlearning
Gwa ndị nne na nna:
Maka ihu ọchị ọ bụla, tinyekwuo minit iri nke telivishọn ma ọ bụ oge ụra.
Ọtụtụ ụbọchị dị mma, ka onye mmụta ahụ were ihe ngosi telivishọn maka mgbede.
Maka ihu ọ bụla ihu igwe, nwatakịrị ahụ na-arahụ ụra ruo nkeji tupu oge ma ọ bụ na - ewepu minit 10 nke telivishọn ma ọ bụ oge kọmputa.
A Daily Home Cheta. Uzo nke elementrị a na-abia na akwukwo ndi choro umu akwukwo ndi isi.
Azu Nzuzo Kwa Ụbọchị. Ọzọkwa, o nwere omume omume na agụmakwụkwọ nwere ike iju ụmụ akwụkwọ elementrị gị aka.
A na-eleba anya na Daily Home Note. Nkọwa akwukwọ a dị oke nwere ike inwe oge ma ọ bụ isiokwu dị n'elu ụdị ahụ na àgwà ndị dị n'akụkụ. Ị nwere ike jupụta na nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ òtù IEP (dịka akụkụ nke BIP )
Ezigbo Nzuzo Ezumike Izu. Bipute ụdị a ma dee na omume ị chọrọ iji tụọ tupu ị depụta ụdị ahụ iji mee ihe.
02 nke 02
Ụlọ Nkọwa nke Abụọ
Ihe ndekọ ụlọ nke abụọ. Websterlearning
A ga-eji usoro ihe omume ụlọ mee ihe na ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ etiti, site na ụmụ akwụkwọ nwere nsogbu omume ma ọ bụ autism na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ga-erite uru site na iji Nkọwa Home.
A pụrụ iji ụdị a maka otu klas ebe nwa akwụkwọ na-enwe nsogbu, ma ọ bụ n'ofe klas maka nwa akwụkwọ nke na-enwe nsogbu ịmechaa ọrụ ma ọ bụ na-abịa njikere. Nke a ga-abụ ngwá ọrụ dị ukwuu maka onye nkuzi akụ na-akwado onye na-amụrụ ihe nke enweghị akara ule nwere ike isi na ya pụta n'ihi nsogbu ụmụ akwụkwọ nwere ma ọ bụ ọrụ ọrụ. Ọ bụkwa ngwá ọrụ dị ukwuu maka onye nkuzi nke na-akwado ụmụ akwụkwọ nwere nsogbu ndị na-ahụkarị nke dị iche iche nke nwere ike iji ọtụtụ ụbọchị agụmakwụkwọ n'ozuzu agụmakwụkwọ, ma na-agbaso nzukọ, na-arụcha ọrụ ma ọ bụ ihe ịma aka ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya n'àgwà ọjọọ dị iche iche na otu klas, jide n'aka na ịkọwa ihe dị mma, nke a na-anakwere na nke dị elu.
Uche na-adịchaghị ama Ama maka ụmụ akwụkwọ sekọndrị
Ntuziaka Na-achọ Nwa
Iwu nke klas - Ntọala nke Ezi Ụlọ Ọrụ
Usoro Nhazi ụlọ
Ịgba Ụgha Oge: Ikwu Okwu Ọjọọ A
Ịghọta Àgwà Ọjọọ
Na-akwado Àgwà Ziri Ezi Maka Ọdịnihu Nlekọta Mma
Ịmepụta Nhazi Omume Nhazi Atụmatụ
Anecdotal Records dị ka ntọala maka igbochi omume
Chee echiche maka ndi nkuzi akwukwo 'Debe azịza nye omume adighi nma
Nkwekọrịta omume omume, akụkọ na-akpata ọdachi, na akwụkwọ arụmọrụ
Nwee aka na omume
Okwu na ihe ndị dị na Usoro Grik oge ochie na Ụkọ
Kedu ihe bụ Redundancy?
Ihe ndekọ nke José Martí
"Va, Pensiero" Lyrics na Text Translation
Otú e si atụ egwu ma na-achịkwa na Craps
Ihe omuma nke elu uwa
Ego Ole Ka Onye Kwesịrị Ekwesị Kwesịrị Ekwesị? Nkebi nke 2
Kedu ụdị égbè kachasị mma maka ụdị ịchụ nta?
Kwadoro na asụsụ
Vietnam Agha 101
Otu esi egbusi ngwongwo data VIN nke Mustang
Akụkọ Nkowa nke Swaziland
La Marseillaise na French na Bekee
Ịchọta isi mmalite ọchụchọ
Nwoke Na-edebe Nwunye Nwụrụ Anwụ n'Ime Kọfị Kọfị!
Ezigbo Esi Egg Egg
Zụlite Echiche Iche Echiche Maka Ọganihu Ụmụ akwụkwọ
Okpukpe nke gosipụtara
Gịnị mere ụgbọala m ji na-agba?
Mahadum nke Virginia Admissions
Kedu Umu Ojii Na-aga n'ofufe Golite?
Kedu ihe bụ 'Wedge Wed' Na Gọfu?
Na-akọwa Skull (ma ọ bụ Skulled Shot) na Goofu
Ihe kachasị njọ na Isiokwu Isiokwu